Margarekha हिउँको घर बन्दै कर्णाली, कसरी छल्छन् माइनस ८ डिग्री ? – Margarekha
हिउँको घर बन्दै कर्णाली, कसरी छल्छन् माइनस ८ डिग्री ?
कमल बहादुर शाही / शीतलहरले तराई कठ्यांग्रिएको छ । त्योभन्दा धेरै तापक्रम घटेर माइनस ८/१० डिग्री पुगेका हिमाली जिल्लाको जनजीवन झन् कष्टकर छ । तर, त्यो चिसो सामना गर्न हिमाली बासिन्दाले अनेक जुक्ति निकालेका छन् । कर्णालीका उच्च लेकाली बस्तीका काम गर्ने उमेरका अधिकांश मानिस तल्लो भेगमा व्यापार गर्न ओर्लेका छन् ।
घर कुर्न बसेका महिला, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाका लागि झन्डै ६ महिनालाई पुग्ने बस्दोबस्ती मिलाएर उनीहरु पहाड र तराई झरेका हुन् ।
तराई नझर्ने धेरै हिउँ पर्ने बस्तीका बासिन्दा खाद्यान्न, लुगाफाटो र दैनिक उपभोग्य वस्तुको जोहो गरेर घरभित्रै बस्ने गरेका छन् । लगातार एक सातासम्म पनि हिउँ पर्न सक्ने भएकाले हिमपातपूर्व नै खानाको जोहो, दाउरा, चौपायाका लागि घाँसको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हिउँ पर्दा ती बस्तीमा आउजाउ बन्द हुने गरेको छ । घरमै दाउराको मौज्दात हुने भएकाले घरभित्रै आगो बालेर बस्ने गरेका छन् । हुम्लामा केही वर्षयता ठूलो हिमपात हुन छाडेको छ । मौसम परिवर्तनको असरले ०४५ सालयता ठूलो हिमपात नभएको स्थानीयको अनुमान छ । ०४५ सालमा पाँच फिटसम्म हिउँ जमेको थियो ।
हिमाली जिल्ला भए पनि हुम्लास्थित कर्णाली नदीको किनार, मुगु र बाजुरासँग सिमाना जोडिएका बस्तीमा हिउँदको समयमा पनि गर्मी हुने गरेको छ । कर्णाली नदी आसपासका मण्डी, दुल्ली, सर्केघाट, मकै, तुम्च, गल्फागाडलगायत बस्तीमा धेरै जाडो नहुने भएकाले ती बस्तीमा उच्च लेकाली भेगका स्थानीय झर्ने गरेका छन् । लेकाली भाग र औल दुवै स्थानमा आफ्ना घर भएकाहरू हिउँदमा औल झर्ने गरेका हुन्, कान्तिपुरमा खबर छ ।
२४ पुष २०७४, सोमबार ०९:२१ प्रकाशित